Fiigicha olaanaan Sudaan Kibbaa adeemsifamuufi
Fiigicha olaanaan Sudaan Kibbaa adeemsifamuufi Featured
ALA bara 2013 irraa eegalee sababii walitti bu'iinsaan qe'eesaaniirraa buqqa'uudhaan dararamaa kan jiran lammiilee Sudaan Kibbaaf galii sassabuufi deebisanii qubachiisuuf dorgommiin fiigicha olaanaa magaalaa guddoo Sudaan Kibbaa, Juubaatti adeemsifamuuf kan karoorfame ta'uu beekame.
Fiigicha Olaanaan Sudaan Kibbaa adeemsifamuuf karoorfame kun Waajjirri Fiigicha Olaanaa Itoophiyaafi Abbaan qabeenyaa Ayishaashum Takkaa jedhamuun kan qophaa'u ta'uusaa beekameera. Kaayyoonsaa inni guddaanis lammiilee biyyattii sababa walwaraansaan rakkachaa turaniifi jiran galii sassaabuun gargaaruuf akka ta'e hubatameera.
Itoophiyaatti Ambaasaaddarri Sudaan Kibbaa Mistar Jeemsi Mirgaan akka ibsanitti, Sudaan Kibbaatti sababii waliigaltee dhabuu hoggantoota olaanoon lammiileen biyyatti kuma 300 ol ta'an qe'eesaaniirraa buqqa'uun beelaafi rakkinoota addaa addaatiif saaxilamaniiru. Kanaaf, deggarsi hawaasa idil-addunyaa maraa barbaachisaa waan ta'eef, qophiin akkanaa murteessaadha jedhaniiru.
Itoophiyaan nageenya Sudaan Kibbaaf ga'ee olaanaa taphachaa turteetti kan jedhan ambaasaddarichi, rakkina yeroo ammaan tana ummata isaaniirra ga'ee jiru furuufis ta'e lammiilee rakkachaa jiran gargaaruuf adda durummaan kan hojjettu ta'uu dubbataniiru.
Walitti qabaan Boordii Fiigicha Olaanaa Itoophiyaa, Kumaalaa Haayilee G/Sillaasee gamasaatiin, Itoophiyaafi Sudaan Kibbaa ollaa ta'uusaanii malee ummanni biyyoota lameenii haala maraanu obbolummaa qaban akka cimsataniif dorgommiin kun Juubaatti adeemsifamuuf karoorfameera. Kana waliinis sababa walitti bu'iinsaan namoota rakkina cimaa keessa jiran hanga humni keenya danda'een gargaaruutu nurraa eegama jechuun dubbateera.
Dorgommii kanarratti namoonni kuma shanii ol ta'an qomoon, amantii, umriifi koorniyaan osoo adda hin baasiin kan hirmaatan ta'uu ibseera.
Abbaan qabeenyaa Obbo Ayishaashum Takkaas akka jedhanitti, dorgommichi kan adeemsifamu ALA Ebla 8 bara 2017 magaalaa Juubaa, Addababaayii Joongaaraangitti ta'uu addeesseera. Asiin durallee Itoophiyaan lammiilee Sidaan Kibbaa rakkachaa turan gargaaraa kan turte ta'uu Obbo Ayishaashum yaadatanii, fuuldurattis itti fufiinsaan nideggarti jechuun himaniiru.
Waajjirri Fiigicha Olaanaa Itoophiyaas namoota rakkatan gargaaruuf hatattamaan deebii kennuu danda'uusaatti galateeffatanii, qophichi akka milkaa'uuf ummatni Sudaan Kibbaa marti tumsuu akka qaban gaafataniiru.
Torban kana/This_Week 17684
Guyyaa mara/All_Days 1442464